Qaado badan oo sawiro leh telefoonka aad Android oo aad rabto si ay u sii leh xusuus? Ma ahan ammaan si ay sawiro dukaanka telefoonka Android, sida aad iyaga tirtirto laga yaabaa in ay shil ama aad u hesho telefoonka aad Android lumay? Xaaladdan oo kale ah, waa kuwa caqliga leh inay sawiro gurmad telefoonka Android. Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa aad muujinaya sida loo raad raac sawirrada Android aan ka kaaftoomi kasta.
Habka Photos 1. kaabta Android inay Google + toos Habka 2. kaabta Pictures on Android la USB Cable Gacanta Habka 3. kaabta Photos Android inay Computer la MobileGo
Habka 1. kaabta Photos Android inay Google + toos ah
Qorshaha inay sawiro gurmad ka telefoonka aad Android inay Google +, si aad si fudud iyaga oo qoysaska iyo saaxiibada aad la wadaagi karto? Raac tallaabooyinka fudud ee hoose.
Tallaabada 1. Tag Google Play Store iyo dejisan iyo rakibi Google + app telefoonka aad Android.
Tallaabada 2. Run Google + telefoonka aad Android. Tubada icon Menu ah inay soo qaadaan menu goobta.
Tallaabada 3. Tubada Settings iyo dooran Camera & sawiro . Markaas, ka jaftaa Auto kaabta p.
Tallaabada 4. noqda on Auto kaabta iyo dhigay fursadaha aad ku doonay. Markaas, sawiro gurmad aad qaadatay in Google +.
Habka 2. Pictures ee kaabta on Android la USB ah Cable Gacanta
Haddii aad jeceshahay inaad dib u kor u sawiro ka Android inay computer iyo ma u leeyihiin in ay isticmaalaan qalab kasta oo, halkan waa sida aad u.
Tallaabada 1. Isku telefoonka aad Android inay computer la cable USB ah. Hadda, telefoonka aad Android waxaa Jaha sida drive dibadda adag.
Tallaabada 2. your computer, heli drive dibadda adag ee telefoonka aad Android. Waxaa fur.
Tallaabada 3. default Sawirrada camera badbaadiyey ee folder DCIM. Photos keeno kombiyuutar lagu kaydiyaa ah folder magacaabay Photos ama wax la mid ah. Haddii aad sidoo kale u isticmaali lahaayeen barnaamijyadooda qaar ka mid ah inaad kala soo baxdo ama sawiro qaado, waxaad u baahan tahay inaad u tagto fayl kuwaas oo heli photos aan iyaga ku jiro.
Tallaabada 4. Open fayl sawir mid mid markaasna aad nuqulka kuwa aad doonayay. Markaas, sawirada camera Android gurmad iyo kuwa kale si aad u computer.
Habka Photos 3. kaabta Android inay Computer la MobileGo
Cable USB Your waa la jebiyey, si aad u ma photos gurmad ka Android karaa? Ha illoobin folder meesha photos yihiin badbaadiyey, si aad u leeyihiin in ay waqti badan ku qaataan wax ka goobidda? Isdeji. Waxaa tahay qaar ka mid ah qalab waxtar leh oo ku siinayaa si fudud u helaan oo dhan fayl photos Android ka dibna ay taageerto kor u photos Android.
Waxaa oo dhan waa wada-in-mid Android gurmad qalab, aad daynin photos gurmad, xiriirada, fariimaha, barnaamijyadooda, xogta app, music, video, jadwalka taariikhda, abuse call iyo waraaqaha aan ka kaaftoomi kasta.
Photos Android kaabta aad qaadatay, oo lagala soo bixi keeno via WiFi ama cable USB.
Soo Celinta sawiro si phone Android aan ku xirid ah.
Sidoo kale gurmad iyo soo celinta xiriirada, SMS, xogta app iyo app, warbaahinta, waraaqaha, jadwalka iyo Guda yeedha.
La jaan qaada Samsung, HTC, LG, Motorola, Sony, Google, Acer, Huawei, ZTE, iyo in ka badan.
Fiiro gaar ah: The version Mac ma taageeri ilaa taageero iyo soo celinta app, xogta app, warbaahinta iyo waraaqaha wakhtigan la joogo
Tallaabada 1. Ku rakib qalabka kombiyuutarka iyo aad u hesho telefoonka aad Android xiran
Si aan ku bilaabo, rakibi oo ay maamulaan MobileGo Wondershare ee kombiyuutarka. Ka qaada cable USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka aad Android inay computer. Haddii aad isticmaalayso Windows version ah, sidoo kale waxaad isku dayi kartaa xidhiidh WiFi.
Ka dib markii ay ku xiran, telefoonka aad Android la soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose la sawiro iyo files ka badan kala saaraa galeeysid bidix.
Fiiro gaar ah: Si aad u isticmaasho xiriir WiFi, waxaad u baahan tahay in gacanta loo soo dajiyo Wondershare app MobileGo telefoonka aad Android. Baro More saabsan app Wondershare MobileGo >>
Tallaabada 2. kaabta oo dhan sawiro ka phone Android inay computer ee 1 click
In uu furmo suuqa hoose, guji kaabta One-Click . Tani waxay kor u Back Up suuqa kala soobixiya. By default, xogta oo dhan aad kartaa in gurmad 1 click waxaa halkaas ku qoran. Sax Photos iyo xog kasta oo kale oo aad rabto in aad raad raac leh. Hubi in meesha file gurmad u noqon doona. Markaas, guji Back Up . In nidaamka gurmad oo dhan, ma in barkinta telefoonka aad Android. Markii uu dhamaystay, riix OK ama Folder Open .
Tallaabada 3. photos Xulo gurmad telefoonka Android
Si gurmad soo xulay sawiro Android, waxaad eegi kartaa in galeeysid bidix oo guji saddexagalka yar ee soo socda in ay Photos . Dhammaan fayl sawir telefoonka aad Android la soo bandhigi doonaa geed buugga Photo ah.
Fur folder sawir iyo xulo sawiro la doonayo. Riix dhoofinta . Tani waxay kor u soo Bixiyaa suuqa kala file computer browser. Raadi meel si loo badbaadiyo sawirrada kuwaas oo guji OK . Marka ay complete, guji Close ama Folder Open .
> Resource > Android > Android Photo kaabta: Photo kaabta in Google + iyo computer Si fudud